အနာဂတ် LEGO Minecraft Minifigure ၏ဒီဇိုင်းကိုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်
26 / 06 / 2021 26 / 06 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 274 Views စာ0မှတ်ချက် ပရိတ်သတ်မဲ, Lego, Lego Minecraft, lego minifigure, Lego Minifigures, အသေးစား, သေးသေးလေး, အရေပြားဗူးများ
၏အနာဂတ် Lego Minecraft သင်ကဲ့သို့သင်တို့မှတက်သည် Lego ၂၀၂၂ အစုတွင်လာမည့်အသေးစားရုပ်ပုံ၏ဒီဇိုင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်အုပ်စုသည်မဲအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
p အဖြစ်art ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော၏ Lego CON လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ပရိသတ်အသစ်တစ်ခုကိုကြေငြာခဲ့သည် Lego Minecraft။ p အဖြစ်art Mojang Studios မှဒီဇိုင်နာများနှင့် Lydia Winters တို့အတွက်စီစဉ်ထားသည့် Q & A ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အခွင့်အလမ်း Lego Minecraft သင့်လက်၌ယခုလာမည့်အရေပြားအတွက်ဒီဇိုင်းဖြင့်တည်ဆောက်သူများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ထင်ရှားသောဒီဇိုင်းများဖြစ်သော ninja၊ Warrior နှင့် Ranger တို့ဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သောအသေးစားပုံစံ ၃ ခုရှိသည်။ ဒီစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းဟာအရေခွံအချို့ကိုပြန်လည်အမှတ်ရစေပါတယ် Lego Minecraft 2016 ကနေအရေပြားအထုပ်။
စတိဗ်နှင့်အဲလက်စ်စသည့်ဗားရှင်းများစွာရှိသောသူများသည်ဤသတင်းများအားနှစ်သက်ကြမည်မှာသေချာသည်။ Lego Group ၏တွစ်တာအကောင့်ဖြစ်သော်လည်း၊ ဇူလိုင် ၃ ရက်တွင်မဲပေးမှုပိတ်သောကြောင့်လျင်မြန်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အထူး #လီဂွန်ကွန် မဲရုံဖွင့် ဘယ်အသားအရေကိုသင်ကြည့်ချင်ပါသလဲ #လီဂို #Minecraft လာမည့်နှစ်တွင်သတ်မှတ်မည်လား ? တစ်ပတ်အတွင်းမဲပေးမှုပိတ်!
- Lego (@LEGO_Group) ဇြန္လ 26, 2021
နေမှနောက်ဆုံးပေါ်အပေါ်ညှိနေပါ Lego ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေ့စေ့စပ်စပ်နှင့်အတူ CON blရာဝတီ နှင့်အခြားထုတ်ဖော်ပြသတစ်ခုအပါအဝင်၎င်း၏ပထမဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်ရပ်ကနေလာကြပြီဖော်ပြသည် လာမည့် Ideas ကစားရန်နှင့်ပြသရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမော်ဒယ်လ်။
← Lego Ideas ကျနော်တို့အားကစားပြိုင်ပွဲဆုရှင်နှင့်အနာဂတ်အစုံထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်
သုံးအမှတ်တံဆိပ်အသစ် LEGO Star Warsဖြေ - Mandalorian တရားဝင်ထုတ်ပြန် →